के तपाईलाई थाहा छ ? बच्चा जन्माउन उत्तम महिना कुन हो ? – Sandesh Press
July 7, 2021 503
संसारका अधिकांश प्राणीले जीवनचक्र चलाउन वा वंशको परम्परा धान्न बच्चा जन्माउने गरेका छन् । प्रकृतिले नै उनीहरुको यौ न जीवन र सन्तान उत्पादन प्रक्रियालाई नियन्त्रण गरिरहेको छ । तर, मानवमात्र यस्तो प्रााणी हो जसले अन्य कुराको जस्तै यौ न जीवनलाई प्रकृतिको नियन्त्रणमा रहन
दिएको छैन । पछिल्लो समय मानिसले सन्तान जन्माउने उत्तम समय कुन हो भन्ने बारेमा विभिन्न बहस हुन,थालेका छन् । ति बहस अनुसार वैज्ञानिकहरुले सन्तान उत्पादनका लागि उपयुक्त समय कुन भनेर अनुसन्धान थालेका छन् ।
१२ वर्ष लामो समय लगाएर गरिएको अध्ययनमा धेरै दम्पत्तीले सन्तान जन्माउन यी दुई महिना रोजे, सकभर गर्मी महिनामा गर्भवती नबन्न वैज्ञानिकहरुको सुझाव . यही भएर वैज्ञानिकहरुको ध्यान पनि कहिले बच्चा जन्माउँदा उपर्युक्त हुन्छ भन्ने तर्फ केन्द्रित भएको छ । अनुसन्धानमा संलग्न वैज्ञानिकहरु भन्छन, ‘बच्चा ग-र्भाधारणको लागि सबैभन्दा उपर्युक्त समय डिसेम्बर र जनवरी महिना हो ।’केहि समय पहिला ५ करोड २० लाख गर्भवती
महिलामा १२ वर्ष लामो समय लगाएर गरिएको अध्ययनमा धेरै दम्पत्तीले सन्तान जन्माउन यी दुई महिना रोजेको जनाएको छ । सकभर गर्मी महिनामा गर्भवती नबन्न पनि अनुसन्धनमा संलग्न इन्डियन युनिभर्सिटीका वैज्ञानिकहरुले सुझाव दिएका छन् ।***अन्य थप समाचार हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला***
Prevअभिनेत्री रक्षा बनिन् आमा, छोरी जन्मिएको २ महिनापछि तस्विर सार्बजनिक
Nextसुत्केरीको ज्यान बचाउन सेनाको सहयोग